Faransiiska oo todobaadkii 2-aad ay rabshado culusi ka qiiqayaan + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Faransiiska oo todobaadkii 2-aad ay rabshado culusi ka qiiqayaan + Sawirro
Faransiiska oo todobaadkii 2-aad ay rabshado culusi ka qiiqayaan + Sawirro
(Paris) 06 Dis 2020 – Qaaquullooyinka ka socda magaalada Paris ayaa galay todobaadkii 2-aad kuwaasoo ka dhashay dibedbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo hindise amaan, iyadoo ay isku dheceen booliiska, gawaari dab qabadsiiyey isla markaana dukeemo burburiyey.
Booliiska ayaa soo xirey in ka badan 100 qofood, halka ay dhaawacmeen dad ka badan 67 qofood, sida uu sheegay Wasiirka Gudaha Gerard Darmanin oo la hadlay Agence France-Presse (AFP).
Magaalada caasimadda ah ee Paris, oo ah halka ay xiisaddu ugu daran tahay, 48 sarkaal ayaa booliiska oo qura ka dhaawacmay, nin dab-damis ah ayaa isna dhaawacmay kaddib markii lagu dhuftay wax qarxaya, iyadoo ay dadku dibedbaxyo ka wadaan sidoo kale magaalooyinka Bordeaux, Lille, Lyon iyo Toulouse, balse halkaa rabshado lagama soo sheegin.
Dad badan oo koofiyado isku soo qariyey ayaa walxo holcaya ku tuurayey booliiska, daaqado burburinaya, isla markaana taayarro iyo gawaari gubey iyagoo jiiray xayndaabyadii ay booliisku jidadka dhigeen.
Booliiska ayaa ku jawaabey sunta dadka ka ilmaysiisa, iyadoo ay dadku isku dhigeen jidadka Avenue Gambetta iyo faras magaalaha dhanka Place de la Republique, sida ay AFP werinayso.
Dadka ayaa diiddan xeer caburin ah oo uu keenay MW Emmanuel Macron kaasoo la yiraahdo sharciga amaanka oo diidaya in sawir ama muuqaal laga duubo ciidamada xilliyada howlgalka, taasoo ay dadku sheegeen inuu yahay mid loogu soo dhigtay xuquuqdoodii madaniga ahayd, isla markaana ay adkaanayso in la soo helo askarigii eed gala.
Previous articleMuxuu xalay sameeyey Eriksen kaddib markii ay dhamaatay ciyaartii Inter Milan & Bologna
Next articleTurkiga oo qabtay weriyeyaal Ruush ah oo si qarsoodi ah u sawirayey wershad lagu sameeyo daroonnada ugu casrisan dalkaasi + Sawirro